Minyengetero Yehusiku Yesimba Kupesana Nerima Masimba | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Minyengetero Yesimba Resimba Kupesana neRima Masimba
Minyengetero Yesimba Resimba Kupesana neRima Masimba
25 Asi vanhu vakati vavete, muvengi wake wakauya, akakusha mashawi pakati pezviyo, akaenda.
Nguva yeusiku ndiyo nzvimbo yekutambira zvese masimba erima. Muchokwadi, chikonzero nei ivo vakadanwa masimba erima imhaka yekuti inoshanda murima, varume vachirara. Kuti uve mutendi anokunda, iwe unofanirwa kudzidza kutora mukana wenguva yehusiku. Iwe unofanirwa kudzidza kunamatira minamato yemanheru. Iwe haugone kukunda Dhiyabhorosi nekuve muKristu chaiye anorara zuva rese uye husiku hwese. MunaRuka 18: 1, Jesu akatiudza kuti tinamate nguva dzese, munaMateo 26:41 Jesu akati isu tinofanirwa kutarisa nekunamata kuti tikunde muedzo, zvakare muna 1peter 5: 8-9, iro izwi raMwari rinoti Dhiyabhorosi parades iye seshumba inodzvova ichitsvaga waangadya, uye tinofanirwa kumuramba takasimba mukutenda. Nhasi tichave tichiita minamato yehusiku ine simba kupesana nemasimba erima. Munamato wemanheru uno unokugadzirira iwe pamweya kuti ukunde masimba ehusiku. Sezvo iwe uchiibatanidza nekutenda, zviitiko zvese zvadhiyabhasi muhupenyu hwako zvinoitwa usiku, zvichaparadzwa muzita raJesu.
Mwana wa Mwari, usarara kure nguva yako yehusiku, kushungurudzwa kwakawanda kunoitwa husiku nemauto akasviba. Aya mauto anorwira vana veVamwari uye anovateverera mugwara risingaperi rekukundwa. Asi apo paunomuka nhasi manheru uye wotanga kuramba izvi zvakasviba kuburikidza neminamato yako yehusiku, iwe unozokunda zvakajeka muzita raJesu. Munamato unogona kushandura chero chinhu uye chero mamiriro ezvinhu, awa yeminamato yeusiku iwe yauri kuda kuita manheru ano ine simba rekubvisa chero chinhu chakaitwa nadhiyeri muhupenyu hwako uye mumhuri. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yehusiku nhasi, satanic embargo yakaiswa pahupenyu hwako ichaparadzwa zvachose muzita raJesu.
Asi ndirini ini ndinonyengetera manheru ano minamato. Nguva yakanakisa yekutanga kubva kumaawa gumi nemaviri kusvika 12am. Idzo nguva dzinowanzodaidzwa kuti dzisingadi Mwari maawa, nekuti idzo inguva apo marudzi ese ehusabata anoitirwa. Mabasa edhiabhori akasviba usiku, ndosaka iwe uchifanira kupikisanawo navo usiku. Iwe unomboshamisika here kuti nei kazhinji zvakaipa zviitiko zvichiitwa husiku? Izvi zvinodaro nekuti Dhiabhori anogadzirisa nzvimbo nemweya yakaipa yakawanda kupfuura masikati. Zvinotyisa neusiku maererano nePisarema 2: 91 ichokwadi. Aya masimba anotyisa erima anoburitswa nadhiyadhi husiku hwese kurwisa ma Kristu asina moto uye anonamata. Asi iwe uri pamoto here kuna Mwari, haugone kukuvadzwa. Moto usingadzimiki waMwari unogara wakapoterera muKristu anonamata. Sezvo iwe uchiita minamato yako mararamiro ako nhasi, kunyanya minamato yemanheru, ini ndinoona hupenyu hwako hwakanyanya kupisa satani muzita raJesu. Kubva nhasi zvichienda mberi, haungazomboziva kukundwa muhupenyu hwako muzita raJesu. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nokutenda uye ukunde husiku hwako muzita raJesu.
1.Musuwo wese uye manera ekupinda kwaSatani muhupenyu hwangu, ngaabviswe zvachose neropa ra
10.Kurasikirwa kwese muhope, shandurwa kuve mibairo, muzita raJesu.
11. Kupikiswa kwese muhope, shandurwa kuve kukunda, muzita raJesu.
12. Kuonda kwese muhope, shandurwa kuve simba, muzita raJesu.
13. Mamiriro ese ezvinhu akaipa muchiroto, shandurwa kuva mamiriro ezvinhu akanaka, muzita raJesu.
14. Ndinozvisunungura kubva mukuonda kwese kwakasvitswa muhupenyu hwangu kuburikidza nezviroto, muzita raJesu.
15. Zvese kuedza nemuvengi kundinyengedza kuburikidza nekurota, kukundikana zvakashata, muzita raJesu.
16. Ini ndinoramba mweya yakaipa yemweya murume, mukadzi, vana, kuroora, kuroodza, kutengesa, kutsvaga, kana kushongedza, mari, shamwari, hama, nezvimwe, muzita raJesu.
17. Ishe Jesu, gezai maziso angu emweya, nzeve nemuromo neropa renyu.
18 Iye Mwari anopindura nomoto; mhinduro nemoto pese paanouya neanorwisa mumweya kwandiri.
19. Ishe Jesu, dzorai zviroto zvese zvasatani nezviratidzo zvokudenga uye zviroto zvakafuridzirwa nemweya.
20. Anoshamisa Ishe, ndinodzosera kukundwa kwandamboita muchiroto, muzita raJesu.
21. Chero ipi neipi yandakarota iyo yakanaka uye kubva kuna Mwari, ndinoigamuchira; nevaya vari vaSatani, ndinovaramba, muzita raJesu.
22. Husiku hwoga hwoga uye kurota kwekurwiswa nemhedzisiro yazvo, zviitwe zvisina basa, muzita raJesu
23. Ini ndinoti ndakasununguka kubva kuzviroto zvaSatani uye zvisina zororo, muzita raJesu.
24. Ini ndinoti rusununguko kubva mukuunza kunetseka uye pfungwa dzinonyadzisa muzviroto zvangu, muzita raJesu.
25. Ini ndinomira ndichipokana nezviroto zvese zvekukundwa nemhedzisiro yayo, muzita raJesu.
26. Zvese satani zvekugadzira zvekumanikidza kwandiri muzviroto nezviratidzo, nyadziswa, muzita raJesu.
27. Zvese zvechidhimoni, zvakanangana nekuparadza chiono changu, hope uye shumiro, gashirwa zvakazara, muzita raJesu.
28.Ruoko rwese rweuroyi, kudyara mhodzi dzakaipa muhupenyu hwangu kuburikidza nekurwiswa nehope, kusvava nekupisa kumadota, muzita raJesu.
29. neropa raJesu, ini ndinotsiura hope dzese dzinotyisa, muzita raJesu.
30. O Ishe, regai chiratidzo chakaipa uye chiroto pamusoro pehupenyu hwangu chipfuure mumusasa wemuvengi, muzita raJesu.
31. Kutuka kwese kwehumwari muhupenyu hwangu kubudikidza nehope, nyiswa neropa raJesu.
32. Kutuka kese kwekuvhiringidzika uye kusagadzikana pakurota muhupenyu hwangu, nyiswa neropa raJesu.
33. Kutuka kwese kwekushungurudzwa muhupenyu hwangu kubudikidza nehope nezviso zvakajairwa, ngazvibatwe neropa raJesu.
34. Ini ndinotumira mabara eanenge chero pfuti yakapfurwa muchiroto back to sender, muzita raJesu.
35. Ini ndinoremedza husiku hwese vatengesi uye ini ndinodzivisa chikafu chavo muchiroto, muzita raJesu.
36. Vese vanotevera mumaroto angu, tanga kuzvitevera iwe, muzita raJesu.
37. Kusvibiswa kose kuri muhupenyu hwangu kuburikidza nehope, kunatswa neropa raJesu.
38. Ndinodzima kurota kwese kwekudzokera kumashure, muzita raJesu.
39. Zvese zviroto zvekushomeka kuenda kuchikoro chejunior, dismantled. Ndichaenda kubva pakubwinya ndichienda pakubwinya, muzita raJesu.
40. Nesimba riri muropa raJesu, ndinodzima mazuva ekukura ezviroto zvese zvakashata muhupenyu hwangu.
41. Iwe Mwari wekusimudzira, ndisimudzire kupfuura ini zviroto zvangu, muzita raJesu.
42. Kurwara kwese, kwakasimwa muhope mukati mehupenyu hwangu, buda ikozvino uye udzokere kune wako anotumira, muzita raJesu.
43. Ishe, itai kuti hupenyu hudzikiswe kubva kune vandirotera, muzita raJesu.
44. Nesimba riri muropa raJesu, hope dzangu dzese dzakavanzika nezviratidzo, huyai mupenyu.
45. Nesimba riri muropa raJesu, hope dzangu dzese dzakasvibiswa nezviratidzo, gashira mhinduro yaMwari.
46. ​​Nesimba riri muropa raJesu, vese vairota hope uye nevanoona avo vari kushanda vachipesana nekuratidzwa kwemaroto angu akanaka nezviratidzo zvirema.
47. Nesimba riri muropa raJesu, zvese zvakanaka zviroto zvawakabiwa zvidzorerwe nemoto mutsva.
48. Nesimba riri muropa raJesu, zviroto zvese zvakanaka uye zvakaratidzwa zvatamiswa, zvadzoreredzwa nemoto mutsva.
49. Nesimba riri muropa raJesu, rega hope dzakanaka nezviratidzo zvakaiswa muchetura zvisasarudzwe.
50. Nesimba riri muropa raJesu, rega zvakanaka zviroto zvionekwe zvakatemwa zviwane simba ramwari.
51. Kusvibiswa kose kuri muhupenyu hwangu, kuburikidza nezviroto, kunatswa neropa raJesu.
52. Chero muvengi anofambira-mberi, akapfurwa muhupenyu hwangu kuburikidza nezviroto zvakaburitswa, muzita raJesu.
53. Ini ndinodzivisa kutyisidzirwa nerufu muzviroto zvangu nemoto, muzita raJesu
54. Zviroto zvese zvakashata, izvo vamwe vanhu vakava nezvangu, ndinozvimisa munyika yeshura, muzita raJesu.
55. Wese mufananidzo waSatan muhope dzangu, ndinokutuka, bata moto zvino zita raJesu.
56. Kurota kwese kwekudzikiswa, nekudzoserwa moto, muzita raJesu.
57. Chese museve werufu muhope, buda udzokere kune watumira, muzita raJesu.
58. Chiroto chega chega chakatsigirwa nehurombo hwakanangana nehupenyu hwangu nekushata kweimba, nyangarika, muzita raJesu.
59. Ini ndinokasira kurota kwese kweurombo pasi, muzita raJesu
60. Ini ndinorega kunyengedzwa kwemapoto ese aSatan, muzita raJesu.
61. Iwe masimba ehusiku, uchisvibisa hope dzangu dzehusiku, urema mitezo muzita raJesu.
62. Yese inorwisa-budiriro hope, tofa, muzita rine simba raJesu.
63. Mazano ese aSatani ekudzvinyirirwa neni muzviroto nezviratidzo, ngaakanganiswe, muzita raJesu.
64. Ndinoomesa mweya iyo inounza yakaipa maroto kwandiri, muzita raJesu.
65. Ndinodzima uye ndinobvisa zvese zvakaipa zviroto, muzita raJesu.
66. Ropa raJesu, dzima hope dzose dzakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
67. Zviroto zvangu, mufaro wangu uye nekubudirira kwandakaitwa kwakavigwa munyika ine rima, huya hupenyu ugonditsvaga izvozvi, muzita raJesu
68. Yese nyoka inorota, dzokera kumutumwa wako, muzita raJesu.
69. Simba rese, kudyara kutambudzika muhupenyu hwangu muhope, kuvigwa uri mupenyu, muzita raJesu.
70. Chero chirongwa chakaipa, chakamira muhupenyu hwangu kubva pakurota kwangu, ngavanyunguduke iye zvino, muzita raJesu.
71. Chero yeatari yeuroyi, yekuzvidza munamato wangu uye nehupenyu hwangu hwemunamato, gashira kurwiswa kwekutinhira kweuMwari, muzita raJesu.
72. Chero chisingaonekwi chasatani kure, zvinokanganisa minamato yangu uye nehupenyu hwangu hwekunamata, ngazvipiswe nemoto wakachena weramwari, muzita raJesu.
73. Iwe wakasungwa wakasungwa urongwa hweusungwa, unobatanidza hupenyu hwangu nekuparadzwa kwemukati nekunze, kupiswa nemoto, muzita raJesu.
74. Iwe mhuri inovamba uranda, inokanganisa uye inoshoresa hupenyu hwangu, ndinogumisa nekuparadza zviitwa zvako neropa raJesu, muzita raJesu.
75. Chero zvipi zvisingaoneki uye zvinoonekwa satanic zvinhu munharaunda yangu uye imba yangu, inokwezva yakaipa mweya yakaipa, yakagochwa, muzita raJesu.
76. Iwe munamato wangu wekunamatira, gashira yeMweya Mutsvene rumutsiriro nemoto, muzita raJesu.
77. Wese akafa wekunamatira aritari yemunamato, gamuchira kubata kwemoto ugouya uri mupenyu, muzita raJesu.
78. Nyonganiso yese yemuviri neyomweya, inobatsira mukusave nemunamato, kufa nekukurumidza kufa nemoto, muzita raJesu.
79. Nzira imwe neimwe yeuroyi muhupenyu hwangu, yakapfuura neropa raJesu, muzita raJesu.
80. Yese miseve yekushandisa zvakashata, yakadzingwa muhupenyu hwangu, buda udzokere kumutumiri wako nemoto, muzita raJesu.
81. Chero nhengo yemuviri wangu, iri pasi pekufurira kudyiwa zvakaipa, inosunungurwa nemoto, muzita raJesu.
82. O Ishe, regai miseve yehumwari yekuparadza igoiswe nemoto uye iburitswe kumisasa yevateresi veusiku, muzita raJesu.
83. Iwe muromo wangu, ndinokusimbisa neropa raJesu, ramba chikafu chasatani, muzita raJesu.
84. Unyengeri hwese hwakaipa huchishandiswa kundidyisa muhope dzangu, ndinokuparadza nemoto, muzita raJesu.
85. Chero kubatana kwevateki vehusiku, vanonongedza hupenyu hwangu kune zvakaipa, vanopararira nekutinhira, muzita raJesu.
86. O Ishe, regai nzira ye mweya wemuroyi uye mashandiro muhupenyu hwangu avharwe neropa raJesu.
87. Chero chipi zvacho muhupenyu hwangu, imba uye zvakatipoteredza, zvinokwezva zviitiko zvevatengesi vehusiku kwandiri, ngazvipiswe nemoto, muzita raJesu.
88. Chero kusindimara kwakakundikana muhupenyu hwangu, ndinokuviga nekukuparadza nemoto, muzita raJesu.
89. Chero nhengo yemhuri yangu, ichisimbisa vavengi vekunze kuzondirwisa, vanofa nekutinhira, muzita raJesu.
90. Chero chombo chekushandisa chevatengesi vehusiku, vachipusha hupenyu hwangu siku nesikati, tendeuka varwe nevako, muzita raJesu.
91. Chero zvigaro zveuroyi mumhuri yangu / muchato / imba, batai moto, muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nekukunda kwangu muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 2
inoteveraMapepa emunamato ekufambira mberi Muhupenyu
Chris Kurume 16, 2021 Pa 7: 23 am
Kutamisirwa mune imba yakaipa izere nemadhimoni semucheche, amai nababa / baba vokurera vakatamba nebhodhi reiiija uye vakabvunza mibvunzo nezvangu. Ex mudiwa akashandiswa kundirwisa nevhudzi rangu, akapiswa mukati memusoro wangu akabva apfura pasi ndokurova moyo wangu semheni. Ndichiri mubhokisi rangu, kutsva, kufamba-famba, simba rangu rakaurayiwa uye vane mukana nyore wekundirwisa. Ndinoda kubatsirwa, mweya upi uyu? ndeipi minamato inodiwa?
mwana Kubvumbi 12, 2021 At 5:36 am